Steel miasa fitaovana mangatsiaka, vy miasa fitaovana mafana - Histar
Ny STEEL MOLD dia matetika manana atin'ny karbaona ambany - 0,36 ka hatramin'ny 0,40% ary ny chromium sy ny nikela no singa mampirongatra indrindra. Ireo toetra ireo dia mamela ireo fitaovana ireo ho nohosorana tsara hatramin'ny farany avo lenta.
Azontsika atao ny manome ny vokatra
BAR ROUND, FLAT FLAT, BLOCK, SHEETS STEEL, TRANO FOTOTRA BARATRA VOAFITRA SY FITAOVANA vita.
Shanghai Histar Metal Co., Ltd dia naorina tamin'ny 2003, nifantoka tamin'ny fivarotana fitaovana izy io ary lasitra vy. Niroborobo haingana izy io mifototra amin'ny karazana fitaovana sy vy vy, kalitao tsara, vidiny mirary ary serivisy tsara kokoa. Amin'izao fotoana izao dia efa amidy amina firenena sy faritra maherin'ny 40 ny marika sy ny bobongolo marika "HISTAR" ary manome serivisy manara-penitra ho an'ireo orinasa any ivelany mihoatra ny 100.
Tct Circular Saw Blade Fa Metal, Tct Boribory Saw Saw, Tct Circular Saw Blade, Hss M35 Boribory Saw Saw, Hss M2 Boribory Saw Blades, Fitaovana fiasan-damba mafana vita amin'ny vy vita amin'ny vy,